10+ Abraham Lincoln Makotesheni e2020 - Quotes Pedia
12 makotesheni uye kutaura
Abraham Lincoln aive mutungamiri wegumi nematanhatu weUnited States of America. Pamusoro peizvi, aive zvakare mutungamiriri pamwe negweta.
Munguva yaaPurezidhendi, akatungamira USA kuburikidza nehondo yeAmerican Civil iyo inofungidzirwa kuti ndiyo huru mune zvematongerwo enyika, bumbiro remitemo uye hutsika zvakatarisana nenyika.
Zvakare, akange abvisa uranda uye akavandudza hupfumi hwenyika. Muhupenyu hwake hwese aagara achifurira uye akakurudzira vazhinji kubudikidza nemashoko ake nepfungwa.
Ngatimboongororai mune zvimwe Abraham Lincoln Quotes. Iye akati, "Ita chokwadi chekuisa tsoka dzako panzvimbo chaipo, ipapo chimira". Izvi zvinoreva kuti ari kukurudzira vanhu vese kuti vaone kuti chii chiri chokwadi uye vave nechokwadi chezvavari kuita vasati vazvipira.
Kana tangosarudza uye tagadzira pfungwa dzako, zvakakosha kuti isu timire pasi redu uye tinamatire kuchinangwa chedu. Kana tikasimuka kubva pachinzvimbo chedu, hatizombofa takasvika pachinangwa chedu kana kuzombowana chero chinangwa muhupenyu.
Akataura zvekare kuti, "Ini ndinofamba zvishoma zvishoma, asi handifi ndakadzokera kumashure". Kuburikidza neizvi, anoda kuonesa kuti zvakanaka kuenda zvishoma asi zvakakosha kuti tinzwisise kuti sezvo tichifamba mukati mehupenyu, hapana chatinoita chinoita kuti tidzokere kumashure.
Tinofanira kuona kuti kunyangwe kana kuedza kwedu kuri kudiki uye kufambira mberi zvishoma, tiri kutevera nzira iri kutitora padyo kuzadzisa chinangwa chedu.
Imwe futi kukurudzira Abraham Lincoln Quote inoti, "Nzira yakanaka yekufungidzira ramangwana rako ndeyekugadzira". Izvi zvinoreva kuti edza kuumba ramangwana raunoda iwe pachako. Usavimba nevamwe kana mamwe mamiriro kuti ugadzire remangwana rako nenzira yaunoda iwe. Asi shanda nzira yako kuitira kuti zviitwa zvako zviumbe remangwana rako.
Zvinotyisa kudaro zvinotora mazwi vagara vaine vanhu pasi rese rinotarisisa kwavari Lincoln yekukurudzira.
Ive neshuwa yekuisa tsoka dzako munzvimbo chaiyo, saka mira wakasimba. - Abraham Lincoln
Hupenyu hunokanda isu mumamiriro akasiyana siyana. Dzimwe dzadzo dziri kuyedza uye isu tinowanzozviona zvakaoma ku…
Nzira yakanak yekufungidzira ramangwana rako kuigadzira. - Abraham Lincoln
Zvinotaurwa nenzira kwayo kuti nzira yakanakisa yaungakwanise kufanotaura nezveramangwana rako ndeye…
Gara uchifunga mupfungwa dzako kuti yako resolution yekubudirira yakakosha kupfuura chero chinhu chimwe chete. - Abraham Lincoln
Chinhu chakanyanya kukosha chaunofanira kufunga nezvacho kugadzirisa kwako. Inofanira kuva yakanyanya…
Iwe haugone kutiza mutoro weramangwana nekunzvenga nhasi. - Abraham Lincoln
Ziva kuti muhupenyu, haugone kuramba uchipukunyuka nguva dzese. Zvakakosha kunzwisisa kuti…
Chero zvaunenge uri, iva akanaka. - Abraham Lincoln
Iwe haugone kuumba vanhu kuti vave vakanaka, asi iwe unogona zvirokwazvo kuve mumwe! Ndiine vanhu vazhinji vakakomberedza…
Chikamu chiri nani chehupenyu hwemunhu chinosanganisira hushamwari hwake. - Abraham Lincoln
Kuchikoro, ndagara ndiri munhu anokanganisa zvinhu uye nanhasi, pandinotarisa kumashure, handimborangarira ...